Make Payment with Onepay to enjoy 3,000 Ks Top-Up – OwayFresh
Make Payment with Onepay to enjoy 3,000 Ks Top-Up
၁. 3000 ကျပ်ငွေဖြည့်ပေးမှုအစီစဉ်သည် Oway Fresh မှ ဈေးဝယ်ယူပြီး Onepay app ထဲရှိ ONE-Bills>Online Shopping မှတဆင့် Oway Fresh သို့ငွေပေးချေသူများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
၂. ယခုအစီအစဉ်သည် ၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ရက်တွင် စတင်ပြီး ၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ရက်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃. Onepay အကောင့်တစ်ခုလျှင် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Oway Fresh မှ ကျပ် ၂သောင်းနှင့် အထက် ဝယ်ယူပြီး ဖုန်းဘေလ်ငွေကျပ် ၃၀၀၀ ငွေဖြည့်ပေးမှုအစီစဉ်ကို တစ်ကြိမ်ရယူခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၄. ဖုန်းဘေလ်ငွေကျပ် ၃၀၀၀ ဖြည့်ပေးမှု ကို ယခု ပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်ပြီးဆုံးပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၁၀ရက်အတွင်း Onepay မှ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၅. ယခု အစီစဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ် ရှိပါက Onepay ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ အတည်ယူမည်ဖြစ်သည်။
၆. Onepay အနေဖြင့် ယခု အစီအစဉ် နှင့်ပက်သက်သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုအပ်သလို အချိန်အရွေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၇. Oway Fresh သို့ Onepay ဖြင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Onepay Customer Care Center ၏ဖုန်းနံပါတ် 09 688383838 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို hello@onepay.com.mm သို့လည်း အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
၈. Oway Fresh မှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Oway Fresh Customer Care Center ဖုန်းနံပါတ် 01 2318939 (သို့) Oway Fresh messenger m.me/owayfresh သို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
1. 3000Ks top-up is eligible to Onepay users who makeapurchase from Oway Fresh and pay with Onepay under ONE-Bills > Online Shopping.
2. Top-up offer is valid from 11th September to 30th September 2020.
3. 3000Ks top-up can be enjoyed one time per each Onepay account when they makeaminimum purchase of 20,000ks and above during the campaign period.
4. Onepay will top up 3000ks to their active Onepay accounts within 10 working days after the promotion.
5. For any dispute that may arise on this promotion, Onepay decision will be deemed final.
6. Onepay reserves the right to amend, cancel, withdraw, terminate or temporarily suspend these terms and conditions for this campaign for whatever reason with no liability to any participants or third parties at any time without notice.
7. For any concerns and issues arise while making payment with Onepay, please contact Onepay Customer Care Center 09 688383838 or Onepay messenger or email to hello@onepay.com.mm.
For any concerns and issues arise while purchasing something from Oway Fresh, please contact Oway Fresh Customer Care Center 01 2318939 or Oway Fresh messenger m.me/owayfresh